Trump oo aqbalay inuu la kulmo Kim John Un [Fursad mise Khiyaano?]
WASHINGTON - Madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa aqbalay in uu la kulmo madaxweynaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-un, taas oo ah wax aanan la filanaynin.
Trump ayaa sheegay in waxa dhacay ay yihiin horumar weyn oo soo kordhay, balse waxa uu sheegay in cunaqabataynta ay sii jiri doonto. Kuuriyada Waqooyi wali wax war ah kama aysan soo saarin.
Dalkan ayaa muddo aad u dheer go'doon ka ahaa adduunka intiisa kale sababtuna tahay ku xad gudub xuquuqda aadanaha ah oo caddeymo badan laga hayo iyo horumarinta barnaamijka hubka nuyuukleerka.
Kuuriyada Waqooyi ayaa bedeshay Siyaasadeedii hore, iyadoo lasoo baxday qorshooyin...